Fampiharana sy lalao maimaimpoana na misy fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Androany dia nandehandeha namaky ny App Store ho an'ny iPhone sy iPad aho ary nahita maromaro fampiharana sy lalao amidy. Ny sasany amin'izy ireo dia nanjary afaka tanteraka, ary ny sasany atolotra miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny dimam-polo isan-jato izay mahatonga azy ireo tena irina.
Araka ny ho hitanao, misy kely ny zava-drehetra, manomboka amin'ny lalao ka hatramin'ny fitaovana ary fampiharana fampiharana. Misy aza ny iray izay malaza be, ka tamin'ny 2014 dia nahazo ny loka Apple Design Awards, iray amin'ireo fanekena nataon'i Apple ho an'ny famolavolana. Miomàna ary araraoty ny alahady maraina hitehirizana euro vitsivitsy. Faingana, satria tsy fantatsika hoe haharitra hafiriana ireo tolotra ireo.
1 tsangambato Valley
2 Blade III tsy manam-petra
3 Solar Walk 2 - ireo planeta an'ny rafi-masoandro
4 TranslateSafari - Mandika & miteny fanitarana ho an'ny Safari
5 Akademia Battle 2: Atsinanana atsinanana
6 RoomScan Pro
Hanomboka amin'ny lalao isika, ary amin'ny lalao malaza sy ekena indrindra. Lohasahan'i Monument Is a lalao ankamantatra telo izay tamin'ny 2014 dia nahazo loka roa: ny loka ho an'ny lalao tsara indrindra amin'ny taona ho an'ny iOS, ary ny loka ho an'ny endrika tsara indrindra amin'ny taona.
Ao amin'ny Monument Valley, mila manamboatra maritrano tsy azo tanterahina ianao ary mitarika andriambavy mangina mamaky tontolo feno hatsarana tsy manam-paharoa.
Monument Valley dia dia tsy dia mandeha amin'ny alàlan'ny fananganana mahafinaritra sy geometry tsy azo atao. Ampianaro ny Andriambavy Ida mangina amin'ny alàlan'ny tsangambato miafina, mahita làlana miafina, mampiharihary ny fiheverana optika ary mamitaka ireo Raven Men enigmatic.
Ny vidiny mahazatra dia € 3,99 fa ankehitriny afaka manao zanak'omby amin'ny antsasaky ny vidiny ianao, amin'ny € 1,99 ihany, noho izany aza adino ny fahafaha-milalao ny iray amin'ireo lalao manakiana sy eken'ny mpampiasa indrindra.
tsangambato Valley€ 4,49
Blade III tsy manam-petra
Blade III tsy manam-petra no fizarana fahatelo amin'ity saga malaza ity, a lalao feno lalao miaraka amin'ny sary mahafinaritra izay mihodinkodina manodidina ny "tantara mampientam-po momba ny fitiavana, famadihana ary fanavotana."
Siris sy Isa dia miara-miasa amin'Andriamanitra Mpanjaka Raidriar amin'ny fikasana mafy handrava ny Mpampiseho ny tsiambaratelo sy ny tafiky ny Titans tsy mety maty. Manala sarona mistery vaovao ary ampiasao ny herin'ny sabatra tsy manam-paharoa amin'ity traikefa nahafinaritra eo amin'ny mahery fo sy ny olon-dratsy ity.
Ny tena mampiavaka azy dia ahitana fifehezana intuitive sy tactile tena mora ampiasaina, sary mihetsika mavitrika, misiona faharoa… Azonao atao ny mampiasa karazana toetra roa, samy manana ny fomba fiadiany telo sy fitaovam-piadiana am-polony maro. Izany rehetra izany sy ny maro hafa, amin'izao fotoana izao dia 0,99 € ihany mandritra ny fotoana voafetra.
Solar Walk 2 - ireo planeta an'ny rafi-masoandro
Solar Walk 2 mahafinaritra izany fampiharana fanabeazana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe mba hianatra zavatra betsaka momba an'izao rehetra izao sy ny tontolon'ny masoandro.
Ny rindranasa Solar Walk 2 vaovao dia fitaovana fampianarana mahomby amin'ny haitao haitao farany kanto. Solar Walk 2 dia manolotra rakipahalalana mifandray amin'ny rafi-masoandro tsy mbola fahita. Miorina amin'ny lalàna ara-batana tena izy sy ny tahirin-tsary faran'izay mandroso indrindra, ny Solar Walk 2 dia mivoaka miaraka amin'ny fijerena sary an'habakabaka amin'ny habakabaka amin'ny planeta, taratra masoandro, auroras ary fehikibo asterôtra mba hampisehoana ny halaliny sy ny fahatsapana ny habaka tsy mbola re tany amin'ny finday.
Ny vidiny mahazatra dia € 2,99 fa ankehitriny azonao atao izany MAIMAIMPOANA mandritra ny fotoana voafetra. Mihazakazaha !!!
Solar Walk 2: Ny sambo€ 3,49
TranslateSafari - Mandika & miteny fanitarana ho an'ny Safari
TranslateSafari Izany dia fanitarana ahafahanao mandika ireo pejin-tranonkala sy lahatsoratra feno amin'ny fiteny marobe avy amin'ny Safari for iPhone na iPad.
Izy io dia miara-miasa amin'ny mpandika tenin'i Bing amin'ny fiteny 40 mahery, ary miaraka amin'ny Google Translate, amin'ny fiteny 60 mahery. Fanampin'izay, mamaky mafy ny fandikan-teny izy, na dia omena ho fividianana fampiharana fanampiny aza ity fampiasa ity.
Ny vidiny mahazatra dia € 4,99 fa ankehitriny azonao atao izany MAIMAIMPOANA mandritra ny fotoana voafetra. Mihazakazaha !!!
Mandika ho an'ny Safari€ 5,49
Akademia Battle 2: Atsinanana atsinanana
Izany dia lalao tetika ady izany dia hitondra anao any amin'ny lemaka rosiana lehibe sy mangatsiaka. Sy ny vidiny mahazatra dia € 19,99 fa izao dia nihena 75% ary afaka manana izany amin'ny iPhone na iPad anao amin'ny € 4,99 fotsiny ianao.
Handravaka ny tranonao ve ianao sa hanao fanavaozana? Miaraka amin'ny RoomScan Pro afaka manao sary mora foana ny drafitra ianao amin'ny iPhone-nao, satria saika ny app mihitsy no manintona azy ireo.
Ny vidiny mahazatra dia € 4,99 fa afaka azonao izao amin'ny € 2,99, fihenam-bidy 40%.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana sy lalao maimaimpoana na misy fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafetra